विशेष बन्द बाकसभित्र नेताको ढुकढुकी : हारजितको दोसाधमा २ सय उम्मेदवारको छटपटी
Ujyaalo शुक्रवार, मंसिर १५, २०७४ ०२:५०:००
काठमाडौं, मंसिर १० –दोस्रो चरणको चुनावमा होमिएका नेताहरु जनमत आफ्नो बनाउन मरिमेटेर लागेका बेला पहिलो चरणको चुनावमा प्रतिष्पर्धा गरेका केही नेता अहिले रात दिन छटपटाएर समय कटाउँदैछन् ।
पहिलो चरणमा उम्मेदवार भएका ७ सय २ जनाको ‘भाग्य’ यतिबेला मतपेटिकाभित्र कैद भएर बसेको छ । तीमध्ये प्रतिनिधिसभामा ३७ जना र प्रदेश सभामा ७४ जनाले मात्र जित्नेछन् । बाँकी ५ सय ९१ जनाले त हार्ने नै हो । तर पहिलो चरणमा केही यस्ता मानिसले हार्नेछन्, जस्ले उनीहरुको राजनीतिक भविष्यमा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गर्नेछ ।
त्यसैले पहिलो चरणमा उम्मेद्वार भएकालाई मात्र होइन आम मतदाता, दलका नेताकार्यकर्ता र चुनावी विश्लेषण गरेर बसेकाहरुमा पनि बाकसमा बन्द भोटको परिणाम कस्तो आउला भन्ने छटपटी छ । उनीहरु सबैको छटपटी र ढुकढुकी अर्को हप्ता २१ गते बेलुकीपछि झन् बढ्नेछ । २१ गते दोस्रो चरणको मतदान सकिएलगत्तै पहिलो चरणको चुनाव भएका जिल्लामा मतगणना सुरु हुनेछ । मतगणना सुरु नहुँदासम्म सुरक्षाकर्मी र दलका प्रतिनिधिले बिरामी कुरेझैं आँखा झिमिक्क नगरीकन मतपेटिकाको पहरा दिएर बसेका छन् ।
कसले हार्ला, कसले जित्ला ?
पहिलो चरणमा ३२ जिल्लाका ३७ निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव भएको चुनावबाट प्रतिनिधिसभातर्फ ३७ र प्रदेशसभातर्फ ७४ गरी १११ क्षेत्रका लागि ७०२ जना उम्मेदवार प्रतिष्पर्धामा छन् । अर्थात यीमध्ये १११ उम्मेदवारले मात्रै चुनाव जित्छन्, बाँकी ५९१ जनाले हार्छन् । यसरी हार्नेमा ठूला र चर्चित नेता पनि पर्नेछन् ।
गोरखा २ बाट प्रतिष्पर्धा गरेका नयाँशक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र माओवादीका बरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशमध्ये एकले चुनाव हार्छन् । जित्ने मैले नै हो भनेर भाषण गरेर मतदाताको मन लोभ्याएका यी दुई नेतामध्ये कसको भाग्य बलियो होला, यसै भन्न गाह्रो छ । उनीहरु स्वयं अनि उनीहरुका कार्यकर्ता र मतदातालाई मात्र होइन, भट्टराईलाई समर्थन गर्ने कांग्रेस र श्रेष्ठलाई समर्थन गर्ने एमालेलाई पनि उत्तिकै छटपटी छ ।
गोरखापछि सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटका उम्मेदवारका बारेमा पनि चिन्ता लिनेहरु धेरै छन् । सिन्धुपाल्चोक २ मा राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा र वाम गठबन्धनको तर्फबाट एमालेका शेरबहादुर तामाङ प्रतिष्पर्धामा छन् । राणालाई जित्छन् कि हार्छन् भन्ने चिन्ता कांग्रेसलाई समेत छ । किनकी गोरखामा नयाँशक्तिका भट्टराईलाई समर्थन गरेको कांग्रेसले यहाँ राणालाई साथ दिएको छ । तामाङको पार्टी एमाले र वाम गठबन्धनको सहयात्री दल माओवादीलाई पनि राणालाई हराउन सकिन्छ या सकिंदैन भन्ने ढुकढुकी छँदैछ ।
यसैगरी नुवाकोटका दुवै क्षेत्रमा कांग्रेसका डा. रामशरण महत र अर्जुनरसिंह केसीलाई वाम गठबन्धनका नेताले चुनौती दिएका छन् । नुवाकोटलाई आफ्नो किल्ला मान्दै आएको कांग्रेसलाई यसपटक हारिने हो कि भन्ने डर धेरै छ । १० गते मतदान सकिएपछि महत र केसी दुवैको ढुकढुकी झन बढेको छ ।
कांग्रेसका महत र केसीलाई भन्दा बढ्ता छटपटी छ एमाले सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईलाई । यसअघि काठमाडौंबाट २ पल्ट उम्मेद्वार भए पनि दुुबैपल्ट चुनाव हारेका भट्टराई अहिले गृहजिल्ला ताप्लेजुङ पुगेका छन् । अरु हेभीवेट नेताभन्दा एमाले सचिव भट्टराईको सम्भावना बलियो छ भन्नेहरु धेरै छन् । तर बाकसभित्र थन्किएर बसेको मतपत्रमा के छ के, कसलाई के थाहा ?
यसैगरी १० गते चुनाव भएको ओखलढुंगामा पनि रोचक प्रतिष्पर्धा भएको छ । जहाँ एमालेका युवा नेता यज्ञराज सुनुवार र कांग्रेसका युवा नेता रामहरि खतिवडा मैदानमा थिए । धेरैले भन्छन्, यी दुवै नेता संसदमा पुग्नुपर्छ । तर दुईमध्ये एकले हार्ने पक्का छ । कसले जित्ला र कसले हार्ला अहिल्यै यसै भन्न सकिन्न ।
संखुवासभामा एमालेका राजेन्द्र गौतम र कांग्रेसका दीपक खड्का, पाँचथरमा कांग्रेसका भीष्मराज आङदेम्बे र एमालेका बसन्त नेम्वाङको अवस्था पनि यस्तै हो । सोलुखुम्बुमा बलबहादुर केसीलाई पनि बाम गठबन्धनका सामान्य नेताले चुनौती दिएका छन् ।
लमजुङबाट प्रतिष्पर्धा गरेका माओवादीका देव गुरुङ र दिलबहादुर घर्तीको भाग्य परीक्षा पनि मतपेटिकाभित्र कैद भएर बसेको छ । रुकुमबाट उम्मेदवार भएका माओवादीका जनार्दन शर्मा, रोल्पाबाट उठेका माओवादीकै वर्षमान पुन अनि जाजरकोटबाट उठेका माओवादीका शक्तिबहादुर बस्नेत र कांग्रेसका राजीवबिक्रम शाहलाई पनि मतदाताले भोट दिइसकेका छन् । जाजरकोटमा बस्नेत र शाहमध्ये कसलाई मतदाताले पत्याउँछन् भन्ने छिनोफानो बाकसभित्र रहेको मतपत्रले गरिसकेको छ । तर परिणामा आउन २१ गतेदेखि मात्र शुरु हुनेछ । बस्नेत र शाहजस्तै जनार्दन र वर्षमानको ढुकढुकी पनि उसैगरी बढिरहेको छ ।
अनि प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री बन्ने दावी सहित मैदानमा उत्रिएका केही नेताको भोट पनि बाकसभित्र पसिसकेको छ । १ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको दावी सहित भोजपुरबाट प्रदेशसभामा उठेका एमालेका शेरधन राई, ३ नम्बर प्रदेशको मुख्य मन्त्रीको दावी सहित धादिङबाट उठेका एमालेकै राजेन्द्र पाण्डेको मत पनि बाकसभित्र बन्द छ । २१ गते मतगणना सुरु भएर छिनोफानो नहुँदासम्म यी नेताहरुको छटपटी बढिरहने छ ।
हार्ने ५ सय ९१ मध्ये लगभग ५ सयलाई चुनावकै बेलादेखि आफूले हार्छु भन्ने थाहा भैसके पनि जित्ने १ सय ११ बाहेक अरु १ सय जनाले त आफुले हार्नुपर्ला भन्ने सोचेका छैनन् । त्यसैले हारजितको दोसाधमा रहेका करीब २ सय उम्मेदवारको लागि त रातको निन्द्रा र दिउँसोको काम एकसाथ हराएको छ ।